Biyo daad ah oo maanta ku soo rogmay Duleedka magaalada Boosaaso – SBC
Biyo daad ah oo maanta ku soo rogmay Duleedka magaalada Boosaaso
Biyo xoogan oo daad ah ayaa galabta ka soo rogmay buuraha ku yaala dhinaca Koonfureed ee Boosaaso, Biyahan soo rogmay ayaa waxaa ay qaateen Qaar ka mid ah gadiidka ku safrayay wada Laamiga ah kuwaasi oo iskugu jiray gaadiid Yaryar & kuwo waaweyn.
Biyahan soo dhacay galabta ayaa yimid ka dib markii saacadihii hore ee Maanta ay roobab Lixaad leh ka da’een Buuraha silsilada golis loo yaqaan ee hareeraysan magaalada Boosaaso.
Goobta ay biyaha marayeen waxaa si dirqi ah ay dadweynaha Boosaaso uga soo badbaadiyee Gadiid isku jiray (Surf,Gaari Bas ah) Biyaha ayaa waxaa ay burburiyeen oo la tageen gari nooca loo yaqaan iskurogada.
Biyaha lixaadka leh ee ka soo dhacay Buuraha ayaa waxaa si dirqi ah looga soo reebay qaar ka mid ah Rakaabkii Gaari Noocaha dhagaxa qaada ah (iskurogo) kaasi oo ahaa wiil da’ayar waxaanna ka muuqday Dhaawacyo yar oo ka soo gaaray Lugaha.
Goob joogayaal ayaa SBC International u sheegay in ay biyuhu la tageen haween & Caruur walow aysan Jiray War rasmi ah oo arintaasi xaqiijinaya.
Gabi ahaanba waxaa xirmay isku socodkii gadiidka ka bixi jiray magaalada & Kuwii soo geli jiray waxana Gadiidka ka yimid magaalooyinka kale ay ku xanibnaayeen dhinaca Koonfureed ee Buunda Jifta halka gadiidka kalena ay ku xanibnaayeen dhinaca Magaalada Xigta ee Xalwo Kismaayo.
Dadweyne Farabadan oo u soo gurmaday Asxaabtooda oo safaro ka soo gelysay ayaa galabta Buuxx dhaafiyay wadada Laamiga ah ee ka baxda Magaalada Boosaaso waxaana guud ahaantood ay Ku dadaaleyeen ay wax ula qaban laaahayeen Asxbaatooda .
Dadka Degan Goobaha uu maro toga Baalade oo Magaalada Boosaaso ka mara dhinaca Qorax u dhaca ayaa waxaa ay walwal xoogan ka qabeen Inay biyahani ku soo bataan kuwaasi oo Marayay Hareeraha Guryo laga dhisay Meelihii uu mari jiray Togga Baalade
Mahan Markii ugu horeysay ee Biyo Xoogan oo kale leh ay kaa soo rogmaan Buuraha waxaana Sannadkasta Xiiligan oo kale Biyo ay ka soo dhacaan Buuraha ku hareeraysan Boosaaso kuwaasi oo ka dhashay Roobabka Xilligan oo kale da’aya.
roobabka & biyahan ayaa ku soo beegmaya xilli Abaaro xoogan ay ka jireen Deegaanada Bariga Fog ee ku yaala Puntland waxaana dadka xoolo dhaqatada ah ay xilligan u muuqdaan inay ka so kabanayaan Abaaraha mudooyinkan Jiray.